एउटी महिलाका ५ श्रीमान् ? , श्रीमतीसँग सुत्ने पालो हप्तामा १ पटक मात्र आउँछ – Khabaarpati
December 21, 2020 Khabar PatiLeaveaComment on एउटी महिलाका ५ श्रीमान् ? , श्रीमतीसँग सुत्ने पालो हप्तामा १ पटक मात्र आउँछ
अरु सबै बाहिर मझेरीमा सुत्छन् । र आ आफ्नो पालो कुरेर श्रीमतीको कोठीमा जान्छन् । जुन कुरा देहरादूनको हिमालय गाउँको परम्परा अनुसार एक जना भाईसँग बिहे गरे उसका सबै भाईलाई श्रीमान् मान्नुपर्ने भएपछि राजमोले सबैलाई श्रीमानका रुपमा अपनाएकी हुन् । जुन विश्वकै अनौठो परम्पराका रुपमा सबैले हेर्दै आएका छन् ।,,,भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला,,